AL-Jazira Oo Warbixin xiiso leh ka qortay 22-guuradda Madax-banaanida Somaliland | Salaan Media
AL-Jazira Oo Warbixin xiiso leh ka qortay 22-guuradda Madax-banaanida Somaliland
Hargeysa(SM)-shabakadda Telefishanka caalamiga ah ee Al-jazeera, ayaa Warbixin kooban ay ka diyaarisay Xuska 18 May ee 22 sano Guurada ka soo wareegtay Markii ay somaliland Xornimadeeda la soo noqotay.
Warbixinta oo ay Magaalada Hargeysa ka dirtay Wariye NAZNINE MOSHIRI oo munaasibada dabaal-dega kaga qayb-gelaysa Caasimada Somaliland, waxay ku sheegtay inay Shacbiga iyo Madaxda Somaliland Caalamka ka dalbanayaan xuquuqda ka maqan ee Aqoonsiga.
waxay sheegtay in Qaranka somaliland Rejo fiican ka qabo inay noqdaan Qaran Madaxbanaan.
waxay sidoo kale ka Markhaati furtay Nabad-gelyada iyo xasiiloonida wadankan ka hana qaaday iyo sida uu isku filnaanshiyaha u gaadhay iyadoo aanu helin gacan-qabasho Caalamiya.
“Somaliland waxay dhacdaa dhinaca Gacanka Cadmeed waxaana lagu Maamuusaa inuu yahay Gobol ka go’ay Somaliya, arinta kala go’a waxay ka dambeysay isku biiridii 1960″ayaa lagu yidhi Warbixinta.
sidoo kalena waxa lagu sheegay “intii lagu jiray Dagaaladii dhacay 1980-kii 40,000 oo Qof ayaa lagu Dilay, ku dhowaad Haaf Milyana waa lagu Baro-kiciyay”.
“Iminka waxay Rajeynayaan goboladda Somaliya ka go’ay inay noqdaan qaran Madaxbanaan”
Warbixinta Al-jazeera waxa kale oo lagu “199 ayay Xornimada qaadatay Somaliland, waxaanay qabsatay afar doorasho oo nabad-gelyo ku dhacday, waana dal Faqiir ah, laakiinse marka loo eego Aqoonsi la’aanta waxa ka muuqda Horumar fiican”ayaa lagu yidhi.